छापा मारे पनि उस्तै ! कर्मचारी होइन, बिचौलियाले चलाउँछन् कार्यालय - inaruwaonline.com
छापा मारे पनि उस्तै ! कर्मचारी होइन, बिचौलियाले चलाउँछन् कार्यालय
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०१, २०७५ समय: ८:५३:३९
वीरगन्ज। वीरगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय बिचौलियाको अखाडा भएको छ। सेवाग्राही कार्यालय पुग्दा कर्मचारीहरूले सीधै बिचौलियामार्फत आए मात्र काम गरिदिने वातावरण बनाउने गर्छन्।सेवाग्राहीको काम गरेवापत बिचौलियाले अतिरिक्त पैसा लिने गरेका छन्। जसमा प्रत्येक कामका लागि उनीहरूले लिने रकमको शुल्क निर्धारण नै गरेका छन्। वीरगन्ज रानीघाटका शिवालकप्रसाद गुप्ता मोटरसाइकल बिक्री नामसारी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका थिए।
सेवाग्राहीका अनुसार अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको लोभमा कार्यालयलाई बिचौलियाको अखडा बनाइएको छ। यस कार्यालयले पर्सा, बारा र रौतहटसम्मको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी काम गर्ने गर्छ।बिचौलियाको हातबाट गएको फाइल कर्मचारीले सजिलै अगाडि बढाउँछन्। सेवाग्राहीले लैजाँदा सुनुवनाइ हुँदैन। कुनै पनि टेबुलमा वा कुनै कर्मचारीको हातमा रावस्वको अतिरिक्त लेनलेन भने हुँदैन। ‘यति रुपैयाँ खर्च लाग्छ’ भन्दै बिचौलियाले एकमुष्ठ रकम तय गर्छन्। कार्यालय परिसर र बाहिर दर्जनौं बिचौलिया छन्।
यस्ता सयौं सेवाग्राही यातायात कार्यालयमा दिनहुँ भेटिन्छन्। जो आफै आफ्नो काम गराउन आउँदा कर्मचारीबाट दुःख भोग्न बाध्य छन्। र, काम अलमलिएपछि बिचौलियाको सहारा लिन पुग्छन्।‘आफै काम गराउन असहज छ, कर्मचारीले हुनै दिँदैनन, एकसेएक बहाना झिक्छन्,’ वीरगन्ज ११ श्रीपुरका नैमुल हकले भने, ‘त्यही भेटिने ‘एजेन्ट’लाई जिम्मा दिएपछि धाउनुपर्दैन। आफ्नो काम छोडेर दिनैपछि धाउनुभन्दा पाँच सात सय रुपैयाँ दिए काम हुन्छ।’
प्रायः मान्छेले त्यहाँ त्यसैगरी काम निल्छन्।’ अर्का सेवाग्राही वीरगन्ज १६ नगवा बस्ने रञ्जित साहको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘बिनाएजेन्टको यहाँ कुनै कामै हुदैन, साहले भने, ‘आफै काम गराउन खोजियो भने तनाव हुन्छ, एजेन्ट नसमाते उपायै छैन।’यसअघि प्रहरीले धेरै पटक छापामारी गरेर बिचौलियाहरूलाई समात्ने काम गरेको छ। स्थानीयका अनुसार छापा मारेपछि केही हप्ताबिचौलिको चहलपहल कम हुन्छ। फेरि पछि उस्तै। नागरिकबाट ।